Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Maxay Tahay Qiimaha Kala Duwan ee Tuubooyinka Aad U Weyn Yahay
2020 / 08 / 27 QoondayntaTilmaamaha qasabada 11110 0
Dadka casriga ahi si dhab ah ayey caafimaadka u qaataan, guri kasta waxaa lagu qalabeeyaa qalab sifeyn ah, laakiin ma ogi, iibso qasabad tayo liidata leh, qalabkaaga sifeynta qaaliga ah sidoo kale waa lacag la'aan. Wasakhowga biyaha wasakhda sare, waa cabsi in laga fekero. Marka, intee in le'eg ayey tahay qasabad la isku halleyn karo? Waa qaali, way xanuun badan tahay, waa raqiis, waa raaxo la'aan, waxay ka baqeysaa tayada.
Si loo soo koobo labada qodob ee soo socda.
1 fa tubbada biyaha, intee ku habboon?
2, 0 qasabadaha macdanta "lead" runtii ma jiraan?
Tubada buuxa ee naxaasta ah, sax intee le'eg ayaa ku habboon?
Xun xuubka tuubada laguma xukumo muuqaalkiisa (waqti gaaban ma ahan wax aan macquul aheyn in la sheego sida ay u fiican tahay daaha dusha sare), asal ahaan waxay kujirtaa maaddada jirka iyo haanta.
1 、 Miisaaniyadda maaddada ugu weyn.
Si loo qabsado suuqa, si loola dagaallamo sicirka dagaalka, isla naxaanta, dhammaantood waa inay gudbaan shahaadada heerka qaran, ka dib tayada tayada ma hoos u dhacdo iyada oo ku saleysan xaddiga lacageed ee ay tahay inaan helo hab lagu yareeyo ah, sidaa darteed kor ku xusan ayaa arkay dib u eegista liidata oo soo baxday: khafiif ah, khafiif ah.
Lacag laaluush ah oo loogu talagalay lacagta qalin, qadiimka qadiimka ah wuxuu ku socdaa jid dheer.
Marka way fududahay inaad miisaamto marka aadan baran karin araggaaga.
2 、 Qiimeyso murgacashada
Spool qaraabada wadnaha futha, xakameyntu waa dhiiga nolosha, tubada waa wanaagsan tahay, ma ahan waqti dheer, furaha ayaa wali ku jira saxarada.
Dheecaanka tuubada, marka lagu daro gacan qabashada ma xirna ciriiri ama dabacsan, taasoo dhalisay guuldarro in lagu xiro tubbada meesha taal, waxay u badan tahay inaad ku iibsatay qasabad leh dabaqad tayo liidata. Dhibaato ayaa ka haysata saxarada, oo aan la hagaajin karin, oo kaliya la beddeli karo. Beddelaadda digaagdu waa shaqo farsamo oo qoyska celcelis ahaan uusan qaban, marka 1, sii wad inaad u dulqaadato daadashada iyo qulqulaya, iyo 2, beddel tubbada.
Wershada dhexdeeda, waxa kale oo jira agabyo iyo qaabab badan oo hawo biyo ah, kuwaas oo laga arki karo suuqa, sida sprams ceramic, spools steel, spools rollers. Sida ugu badan ee loo isticmaalo uguna waxtarka badan ayaa ah xaabada dhoobada.
Suuqa biyo-qabadku wuxuu ku daadanayaa suuqa, wasakhda yar ee biyaha, xirashada iska caabinta iyo gabowga, waxqabadka sumowga oo wanaagsan.
Qalabka birta korantada leh
Qiimo sare, oo aan si fudud u nijaaseyn wasakhda nolosha biyaha, isla mar ahaantaana dhinaca wareegga xagal weyn oo la isku habeyn karo, tayada biyuhu kuma fiicna aagga si loo doorto tan ka wax ku oolka ah.
Qubarada qadiimka ah, ee laga soocaa, majiraan wax udhaxeeya 2, ee qiimaha iyo nolosha labadaba.
Ka dib markii aad u sheegto qiimaha joogtada ah ee tubada korantada ee joogtada ah, noloshu ma waxay u eg tahay god meelkasta?
Ujeeddada kor lagu soo sheegay ayaa ah isticmaalka naxaasta wanaagsan, khafiifka ah iyo nalka, u dulqaado wixii la soo dhaafay, laakiin haddii aad la kulanto naxaas tayo liidata, waxaan kuugu baaqayaa inaad si dhakhso ah u beddesho, daqiiqada aad cabto af leh sumowga.
Miyaa tuubooyin macdanta "lead" ah oo runtii jiraa?
2018, gobolku wuxuu soo saaray heerarka kormeerka qasabada ugu adag taariikhda, taas oo kicisay mowjado ka socda warshadaha qasabada si loo arko isbedelka midabka "hogaanka". Si ay qasabadaha uga dhigaan kuwo si fiican u iibiya, ganacsiyada qaar waxay ku doodaan in qasabadooda laga sameeyo naxaas saafi ah.
Kuwa akhrinaya buugga way yaqaaniin waxa ay tahay naxaas saafi ah, naxaas saafi ah waa naxaas la farsameeyay oo ay ka badan tahay 99.5% saafi ah, naxaas saafi ah waa bir bir jilicsan, oo aan sahlanayn in la gooyo, ma weydiisan karaa in ganacsaduhu sameeyo qasabad oo naxaas ah?
Maarta daahirka ah “Copper” waa naxaas aan dabiici ku jirin oo badiyaa laga helo isku dhaf, macdanta naxaasta ah.
Naxaastii saafiga ahayd: waxa ku jira macdanta naxaasta ee ugu sarreysa, oo ka kooban 99.7 illaa 99.95%; Waxa kale oo loo yaqaanaa naxaas buluug ah, waxyaabaha ugu muhiimsan ee naxaas ah iyo qalinku, waxyaabaha ugu muhiimsan ee wasakhda leh: fosfooraska, bismuth, antimony, sunta arsenic, birta, nikkeliska, rasaasta, tin, baaruud, zinc, oksijiin, iwm.; Waxaa loo isticmaalay soo saarista qalabka waxqabadka, aluminiumka horumarsan ee birta ka sameysan, aluminiumka ku saleysan naxaasta. Naxaas gaduudan oo leh wax kabadan 96% maadada naxaasiga ah ayaa guud ahaan suuqa loogu yaqaanaa naxaas saafi ah, ama naxaas guduudan. Naxaastii saafiga ahayd waa qaali, adag tahay iyo laba-gees, marka la barbardhigo awoodeeda, adkaanta hooseysa, jilicsanaanta iyo ku habooneynta mashiinnada. Daawaha naxaasku waxay beddelaan astaamaha naxaasta, taas oo ka dhigaysa mid si ballaaran loo isticmaalo.
Aluminiumka-birta ayaa beddelaya sifooyinka naxaas, taasoo ka dhigaysa mid si ballaaran loo isticmaalo. Waxaa jira saddex nooc oo caam ah oo biraha naxaas ah.
1 brass Naxaas guud: Waa bir bir ah oo laga sameeyay naxaas iyo zinc.
2 、 Brass: Polyalloy wuxuu sameeyay oo ku daray waxyaabo kale oo aluminiin ah naxaas caadi ah. Waxyaabaha inta badan lagu daro waa sunta rasaasta, tinum, aluminium, iwm., Inta badan si loo hagaajiyo awooda gantaalaha si loo wanaajiyo hawsha, waxaa lagu magacaabi karaa naxaasta macdanta "lead", naxaas, naxaas aluminium.
3, naxaas adag: hagaajinta iska caabbinta naxaasta, xoogga, adkaynta iyo goynta, iwm, ee ku jirta macdanta-zinc aluminium si loogu daro qadar yar (guud ahaan 1% ilaa 2%) tin, aluminium, manganese, bir, silicon, nikkel, sunta rasaasta iyo waxyaabo kale.
Marka, si loo fahmo in dhammaan tubooyinka naxaasta ah ee buuxa ee leh birta naxaasta ah, aysan jirin 0 macdanta macdanta "copper copper", "lead", "lead", "free-lead" oo kaliya waxay matalaysaa waxa ka kooban macdanta "lead", waxa dhabta ah ee muhiimka ahi waa xaddiga roobka macdanta "lead", waa mid la xidhiidha amnigayaga biyaha cabitaanka.
Naxaasta ayaa ku jirta macdanta "lead" oo waxaan wada cabeynaa sun?
Ha ka welwelin, soo saarista qasabadaha, gobolku wuxuu leeyahay halbeegyo tayo kontarool ah, illaa inta koontaroolku ku dhex jiro, nabadgelyada biyuhu weli waa suurtagal. 2018 hirgelinta heerarka baaritaanka qasabada, warshadu waxay tiri heerarka qasabada ugu adag taariikhda, shuruudaha roobka biraha culus waxay leeyihiin shuruudo cusub. 16 walxo culus oo bir ah, oo ay ku jiraan rasaasta, iyo 17 tilmaamayaasha qiimaha dareeraha ayaa lagu qeexay inay yihiin qodobo qasab ah. Dhexdooda, qiimaha tirakoobka (Q) ee roobka da'a ma ka weynayn 5 μg / L.
Maandooriyaha naxaasta ayaa mise waa?
Dareen ahaan, walax kasta ayaa sun ku ah jirka ilaa iyo inta ay ka gaareyso xaddi cayiman, laakiin haddii ay ka hooseyso qaddar cayiman ma jiro walax sun ah, furaha ayaa ah xaddiga jirka lala xiriiro, macnaha xiriirka , qaabka xidhiidhka iyo astaamaha jireed iyo kiimikada ee walaxda lafteeda, laakiin inta badan qadarka xidhiidhka jidhka ayaa ah go’aaminta.
Sumoobaanka naxaasta ee jirka bini'aadamka aad ayuu u hooseeyaa, waana kaliya marka qaadashada ay si aad ah uga sarreyso qiimaha caadiga ah in falcelinno aan wanaagsaneyn sida khalkhalka caloosha iyo mindhicirka ay sababi karto. Horumarinta sayniska iyo tikniyoolajiyadda, waxaa la ogaaday in walxaha kale ee ku jira aaladaha naxaasku ay leeyihiin saameyn waxyeello leh oo jir ahaaneed ku leh caafimaadka jidhka: qaddiyadda iyo aasaasku waa - ka-nuugid badan.
Hore:: Noocyada Qubayska Qolka Musqusha ee Keli Kaliya Next: 5 Qasnadaha Dibadda ee ugu Fiican 2020
2021 / 01 / 10 710
2020 / 12 / 21 4948
2020 / 11 / 19 4247
2020 / 11 / 19 3833
2020 / 11 / 18 4183